October 2019 – Gulled Salah
Gudoomiyaha iyo xubnaha Gudigga ayaa kulan la qaatay xubno ka socda Midowga Yurub.
Gudoomiyaha iyo xubnaha Gudigga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa saaka xarunta dhexe ee Garowe kulan kula qaatay xubno ka socda Midowga Yurub (European Union). Waxay kawada hadleen dedaalka Guddigu wado ee ku aadan sidii Puntland loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod ah. Saad faahfaahin dheeriya u hesho guji Linkigan hoose. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga. …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Gudigga ayaa kulan la qaatay xubno ka socda Midowga Yurub. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay qaybo ka mida siyaasiyinta Puntland.
Gudoomiyaha iyo xubnaha Gudigga doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa kulan la qaatay qaybo ka mida siyaasiyinta Puntland oo ay kawada hadleen sidii loo dardar galinlahaa hanaanka dimoqraadiyada Puntland, loona heli lahaa doorasho qof iyo cod ah. Shirkan ayaa la isku weydaarsaday afkaaro ku saabsan nidaamkan iyo doorka laga rabo siyaasiyiinta.
Gudoomiye iyo xubnaha Guddiga la kulmay Major Walla oo ka socotay SSF.
Gudoomiye Guuleed Saalax Barre iyo xubnaha Guddiga KMG ah Doorashooyinka Puntland ee #TPEC ayaa kulan la qatay wafdi ay hogaaminayso #Marjorie #Walla oo ah khabiirad ka socota Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya (SSF) oo Guddiga kala shaqayndoonta dhamaystirka qorshaha hirgalinta doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dawladaha hoose ee Puntland. Saad faahfaahin dheeriya u hesho …
Gudoomiye iyo xubnaha Guddiga la kulmay Major Walla oo ka socotay SSF. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay TPEC-1 iyo TPEC-2.
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ee Tpec ayaa maanta kulan la qaatay Labadii Guddi Doorasho ee ka horeeyay Guddiga hadda jira. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray hannaanka dimuqraadiyadda Puntland, iyo casharrada laga baran karo isku dayadii hore ee ay sameeyeen labada Guddi. Saad faahfaahin dheeriya u hesho …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay TPEC-1 iyo TPEC-2. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay Culimaa’uddiinka Puntland.
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga doorashooyinka Puntland ee Tpec ayaa maanta shir la qaatay xubno kamid ah Culimaauddiinka Puntland ee ku sugan magaalada Garowe.. Kulanka Guddiga iyo culimada ayaa diirada lagu saaray dedaalada socda ee ku aadan hannaanka Dimuqraadiyadda Puntland ee ay garwadeenka ka yihiin Guddigu. Saad faahfaahin dheeriya u hesho guji Linkigan hoose. https://www.facebook.com/TPECPuntland #CodkaaguWaaXaqaaga. …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay Culimaa’uddiinka Puntland. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay madaxda ururka #MAP iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan.
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ee Tpec ayaa maanta kulan la qaatay madaxda ururka #MAP iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan ee ka howlgasha magaalada Garowe. Kulankan oo ka dhacay xarunt guddiga ayaa diiradda lagu saaray hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorka ay ka qaadan karto warbaahintu. Saad faahfaahin dheeriya u hesho guji Linkigan hoose. https://www.facebook.com/TPECPuntland …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay madaxda ururka #MAP iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan. Read More »